Mpanamboatra fiara mandeha an-trano | Factory sy mpamatsy automatique an-trano any Sina
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny rafitry ny gara. Izahay, any Pandawill, dia manampahaizana manokana amin'ny serivisy fanamboarana trano an-tsaina. Misaotra ireo orinasan-tsika manan-tsaina, ny injenieranay sy ny masininay dia mampiasa fandalinana angon-drakitra lehibe, computing cloud, intelligence intélitive (AI) ary 3D-pirinty hamoronana fitaovana mifandraika amin'ny trano manan-tsaina.
Manomboka amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny birao PCB ka hatramin'ny serivisy NPI sy ny vahaolana maharitra andavan'andro ny vokatra, ny orinasan-tsika marin-tsaina dia mety hitondra vahaolana amin'ny famatsian-javatra marani-tsaina ho an'ny mpanjifantsika, ho an'ny fitaovana an-trano rehetra.
Rafitra fanaraha-maso LED
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny rafitra fanaraha-maso LED. Izahay, any Pandawill, dia manampahaizana manokana amin'ny serivisy fanamboarana trano an-tsaina. Misaotra ireo orinasan-tsika manan-tsaina, ny injenieranay sy ny masininay dia mampiasa fandalinana angon-drakitra lehibe, informatika rahona, inteligence artifisialy (AI) ary 3D-pirinty hamoronana fitaovana mifandraika amin'ny trano manan-tsaina.